5 Calaamadood Oo Lagu Garto Marka Lamaanuhu Ay Isnacaan
Aayaha editorNovember 17, 2018
Waxaan idiin soo gudbineynaa 5 calaamadood oo muujinaya ama aad ku garan karto inaad isnacdeen adiga iyo lamaanahaaga.
Nasashada waa wax mararka qaar dhaca inta lagu guda jiro xiriirka. Waxaa la rumeysanyahay in gacan ay ka geysato badbaadada xiriirka burburi raba, balse xaqiiqda ayaa ah inay waxbadan waxyeeleyso xiriirka lamaanaha intii ay hagaajin lahayd.
Marka aad dareentid inaad ku qanacsantahay inaadan la hadlin ama aadan arkin lamaanahaaga muddo isla markaana aad ka maqnaatid waxay ubadantahay inaad horey uga socotid xiriirkaas.
Islama xariirtaan inta badan
Mid fog ama mid dhow, faa’idada ay leedahay in lamaanaha ay wada xiriiraan waa mid aad uculus. Haddii aadan sameynin waqti aad iskula hadashaan ama isku maqashaan oo aad ku kala feker qaadataan xiriirkaas sina uma hagaagayo.
Marka aad aragto adiga iyo lamaanahaaga oo aan wada xiriireyn waa tilmaan muujineysa in xiriirkaas burburi rabo.
Aragtida oo la isku soo bandhigi waayo
Waxaa adkaata in qof walba uu qofka kale aragtidiisa usoo bandhigo ama muujiyo, waxaa jira xiriiro badan oo ku jira marxaladdaan murugada leh balse waxaan aaminsanahay in haddii ay arrimuhu sidaan isku bedelaan ma ahan arrin wanaagsan.
Kuma faraxsanid la joogiisa/lajoogeeda
Waad kala taqaan markaad qof jeceshahay iyo markaadan jecleyn. Jacaylka wuxuu la yimaadaa farxad iyo raaxo. Waadku faraxsantahay inaad qofkaas la joogtid, waadku faraxsantahay inaad la hadashid, waad jeceshahay lakulankiisa, si kastaba xaaladda aad ayay uxuntahay haddii aadan dareemin waxyaabahan, waana arrin halis ah.
Kama walwashid haddii aad isku dhacdaan
Caadiyan, marka qof aad jeceshahay uu kula dagaalamo ama isku dhacdaan, waxaad dareentaa xxanuun, niyadjab iyo caro,waxaadna rabtaa inaad wax walbo oo aad ku dajin kartid aad sameyso, balse haddii kale waa tilmaan kale haddii dareenkaas uusan Meesha oolin sida, hadaad maqasho in lamaanahaaga uuku fasixi rabo isla markaana aadan ka welwelin.
7 Calaamadood Oo Lagu Garto Ninka Dhaqanka Wanaagsan Oo Gabar Kasta Ay U Baahantahay
Suldaan Seeraar oo hees cusub “Isxilqaan” u qaaday dowladda Soomaaliya (Daawo)
Haddii Ninka Uusan Lahayn Sifooyinkaan, Ha Guursan Gabaryahay
Calaamadaha lagu yaqaan haweeneyda jecel inay ninkeeda xukunto